juillet 2014 – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Alahady – 27/07/2014 – Toriteny
Mety ny mahafoy izay tsara mba hahazoana ny tsaratsara kokoa.
Izay no foto-kevitra anentanan’ny fiangonana antsika androany.
Milaza izany idridnra ny Evanjely sy ny Vakeiteny telo izay naroson’ny fiangonana tamintsika teo. Tao @ Evanjely, niteny momba ny fanoharana ny fanjakan’Andriamanitra Jesoa. Dia fanoharana telo no nilazan’I Jesoa izay fanjakan’Andriamanitra izay.
Voalohany, ny fanjakan’ny lanitra hoy Jesoa dia tahaka ny rakitra nafenina tany an-tsaha, izay hitan’ny olona ka nafeniny tao ihany aloha. Dia lasa tamin-karavoana izy nivarotra izay fananany rehetra ary nividy io saha io. Misy fihetsika sy zava-mitranga tsy mahazatra antsika io.
Rakitra nafenina tany an-tsaha. Ny mahazatra antsika, raha manana tahiry isika dia mametraka azy any banky, any izy mety mitombo. Fa t@ andron’I Jesoa tsy mbola nisy an’izany banky izany. Tsy nisy ny banky, dia ny fanaon’ny olona izay manana vola sy tahiry dia mametraka azy anaty vatakely. Dia mandavaka izy dia alevian any ambanin’ny tany iny tahiry iny. Dia manao vatakely vaovao indray izy mandrapahafenony. Izay ny fomba fanao fitehirizana vola t@ izany andro izany.
Eto koa ary, nafenina ny vola, natao anaty lavaka. Maty tampoka ny tompon’io vola io izay tsy misy mahalala afa-tsy izy irery ihany. Ny dikan’izay dia hoe tsy misy mahalala hoe aiza ny vola no mipetraka. Fa sendra nisy olona nokaramaina hiasa tany, hamboly. Ka rehefa miasa izy dia naheno zavatra mitsatoka @ angady. Teo dia nihady hatrany aloha niezaka ny nahalala izay ao anaty tany ao. Nojerena ka vata no tao, nosokafana ka vola no tao anatiny. Ny fihetsika nataon’ilay mpiasa, arak any fanoharana, dia nosaronany tao ilay vatakely dia lasa izy nandeha nody. Namidiny daholo an-kafaliana no nivarotany ny fananany rehetra, na ny tany na ny trano mba hividianany an’ilay tany misy an’io rakitra io.
Lasa tamin-karavoana izy nivarotra ny fananany hividianany io tany misy rakitra sarobidy io. (suite…)
Continuer la lecture Alahady – 27/07/2014 – Toriteny
Alahady – 27/07/2014 – Tenin’Andriamanitra
Vakiteny voalohany: Boky voalohan’ny Mpanjaka 3, 5.7-12
Fahendrena no nangatahinao ho anao.
Tamin’izany andro izany ny Tompo niseho tamin’i Salômôna tamin’ny nofy, nony alina, tany Gabaôna, ka hoy Andriamanitra taminy: “Angataho izay tianao homeko anao.” Ary hoy i Salômôna: ”Ry Tompo Andriamanitra ô, efa nampanjaka ny mpanomponao handimby an’i Davida raiko Ianao; izaho anefa dia mbola tovolahy tanora kely tsy mahay mitondra tena. Ary ny mpanomponao dia eo afovoan’ny vahoakanao, izay nofidinao, vahoaka be dia be, tsy azo vinavinaina ny habetsahany, tsy tambo isaina, fa maro be loatra. Koa saina mahiratra no omeo ny mpanomponao, hitsarako ny vahoakanao, hanavahako ny soa sy ny ratsy. Fa iza moa no hahay mitsara izao vahoakanao maro be izao!” Nankasitrahan’ny Tompo ny nangatahan’i Salômôna izany zavatra izany taminy. Ka hoy Andriamanitra taminy: “Noho ianao nangataka izany zavatra izany, ka tsy nangataka andro maro ho anao, sy tsy nangataka harena ho anao, ary tsy nangataka ny ain’ny fahavalonao ho anao; fa ny saina no nangatahinao ho anao mba hitsara araka ny rariny; dia indro, tanterahiko ny teninao, fa homeko saina hendry sy mahiratra ianao, ka ny olona talohanao tsy nisy toa anao, ary tsy hisy toa anao ny olona hitsangana ato aorianao”.
Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Rôma 8, 28-30
Nokendreny hitovy endrika amin’ny Zanany koa isika.
Ry kristianina havana,fantatsika koa fa ny zavatra rehetra dia entin’Andriamanitra hahasoa izay tia Azy, dia ireo efa voaantso araka ny fandaharany. Satria izay fantany rahateo no notendreny hitovy endrika amin’ny Zanany koa, mba ho Lahimatoa amin’ny rahalahy maro Izy. Ary izay notendreny no nantsoiny koa; izay nantsoiny no nohamarininy koa.
Evanjely nosoratan’i Md Matio 13, 44-52
Nivarotra izay rehetra mety ho fananany izy ary nividy io saha io. (suite…)
Continuer la lecture Alahady – 27/07/2014 – Tenin’Andriamanitra
Misy ilay tsinjaery kely nataontsika t@ mbola kely, (suite…)
Continuer la lecture Alahady – 20/07/2014 – Toriteny
Avelao hiara-maniry izy roroa ambara-piavin’ny fijinjana. (suite…)
Continuer la lecture Alahady – 20/07/2014 – Tenin’Andriamanitra
Continuer la lecture Fetim-piangonana 2014